Global Voices teny Malagasy » Shina: Ny Zo Tsy Hatahotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Aogositra 2018 6:28 GMT 1	 · Mpanoratra Bob Chen Nandika (fr) i Samantha Deman, Sylvia Aimée
Sokajy: Shina, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tanora, Zon'olombelona
Tao anaty lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Tsiky mafaitra ” [amin'ny teny sinoa], hadihadian'ny blaogera Lan Xiaohuan ny fomba nataon'ny firenena iray nanampenam-bava ny vahoakany vonton-tahotra. Malahelo ny vola diso midangana be loatra aloan'ny olom-pirenena iray ankehitriny mba hampanan-danja ireo zony, maneso ny tahotra mihanaka ihany koa izy izay manempotra ny faharisihana sy ny fitiavana ananan'ny olona, ary mamintina fa tena tsy mitsangana tsy amin-tahotra mihitsy ireo shinoa.
Manomboka amin'ny tantara fohin'ny fahazazany izy:
Tena saro-tahotra aho tamin'ny mbola vao 5 taona teo ho eo. Indray andro, raha niverina avy nianatra aho, nitantara tantaranà matoatoa tena mampihoron-koditra iray tamiko ny anabaviko izay tsy nahitàko tory mihitsy nandritra ny alina, na ny raiko ihany koa aza, satria nohozongozoniko izy raha vao resin-tory. Ny ampitso maraina, notreronin'ny raiko ny anabaviko: “Jereo ny tahotra nomenao azy! Kapohiko ianao raha mbola sahy mamerina !”
Ankehitriny, naharay taratasy avy tamina ankizilahy iray aho izay manoratra toy izao: “Tena manahy mafy aho tato ho ato. Afaka manampy ahy ve ianao azafady? Namoaka lahatsoratra iray aho vao haingana, teo amin'ny blaogiko Baidu.com, mikasika an'ireo tranga teo amin'ny kianja Tiananmen. Nofafan'ireo mpitantana ny vovonana mpampiantrano ny blaogy izy io ary voasakana koa aza ny kaontiko. Ankoatra izay, matetika aho no afaka mandingana ny GWF (n.d.t.: rindrimbe virtoaly, ny sivana amin'ny aterineto) mba hamakiana ireo tranonkala voasakana ao Shina. Mety ho tafiditra ao anaty lisitra mainty ve aho? Mety handrava ireo fiksako hianatra any ivelany ve izy io? Miangavy aho, toroy hevitra aho, misaotra betsaka indrindra!”
Toran'ny hehy aho taorian'ny namakiako an'io ary nampahery azy tamina feo malefaka. Saingy tsaroako ho nalahelo kely azy ihany aho, nampahatsiahy ahy ny raiko nitrerona ny anabaviko, “Jereo ny tahotra nomenao azy !”
Tsy voatery hiankina amina herisetra ny fampitahorana. Ampy ny fampitomboana fotsiny ny sandan'ny fikatsahana ny fitsaràna. Ary koa, tsy dia ilaina akory aza izany. Raha vao mazava fotsiny fa azo ampiana ny vesatr'io sarany io na rahoviana na rahoviana, ampy izany handresena lahatra antsika tsy hetsika. Jereo ny tantaran'ireo olona “nasaina” hiresaka amin'ireo mpitandro ny filaminam-bahoaka ; jereo ny fomba nanaovana an'ireo mpanao gazety tao Sichuan (nandritra ny horohorontany tamin'ny 12 may lasa teo). Mba jereo ny fahorian'izy ireo sy ny tahony, – ho tsapanareo ny zavatra rehetra.
Mavesatra loatra tsy zakan'ireo soroka mahianay ny sandany.
Raha tsy maintsy ampanginina ireo faran'izay maivana indrindra amin'ny fitarainanay, raha toa izahay tokony hitandrina amin'izay ambaranay rehefa monina any ivelany, raha toa izahay tsy maintsy miatrika ady anaty mialoha ny kabary rehetra, amin'ny fomba ahoana no hahafahanay miatrika marina an'ireo totohondry sy basin'ny jiolahimboto? Amin'ny fomba ahoana no hahafahanareo mitaraina raha ny zavamisy hoe tsy mijoro intsony ny olona mba hanohitra ny ratsy ?
Tamin'ny taona 1949, nanamafy i Mao fa: “Miarina ny vahoaka Shinoa!” Saingy hatreo, tsy sasa-niarina isika. Rehefa naverina tamin'i Shina i Hong Kong, nilaza isika fa niarina . Rehefa nisokatra ireo Lalao Olaimpika, mbola niarina indray isika. Nanontany ireo vahiny sasantsasany manao hoe: “Fa tsy efa nijoro ve ianareo? Nahoana ianareo no mbola manohy miteny foana ankehitriny hoe niarina?” Naha-tezitra ahy ny fanontanian'izy ireo: “Fa, tsy tena niarina tsara izahay taloha. Tsy nanao afatsy ny nandandy, ka nahoana izahay no tsy afaka hiarina, matetitetika monja, mba haka aina? Eto aminay, mizaka ireo fanalàm-baraka atao amin'ireo olom-pirenenay izahay, ary izany indrindra no tsy maintsy hampitrakànay ny loha manoloana ‘ireo vahiny toa anareo. Raha tsy izany, ho sempotry ny fangotrangotraky ny hatezeranay izahay!”
Noho izany, raha toa isika olon-dehibe tsy maintsy hiondrika amin'ny tany amin-kenatra, ahoana no hampianarantsika an'ireo zanatsika ny atao hoe “fahasahiana” sy “fitiavana”? Azo tantaraina azy ireo, ireo angano milaza fahasahiana sy fitiavana raha mbola zaza izy ary, amin'ny fotoana izay hampiharany an'ireo, hikiakiaka aminy hoe: “Tsia, milefera!”
Angamba amin'ny manaraka, rehefa hody any Shina aho, dia tokony handalo eo amin'ny kianja Tiananmen mba hiady hevitra amin'ireo maty miala sasatra ao: “Jereo ny tahotra nataony anareo!”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/08/124240/
 Tsiky mafaitra: http://www.bullogger.com/blogs/shafa/archives/290322.aspx